पुतली- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
माघ ५, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
फूलबाट रस लिने गर्छ पुतली,
पखेटाले फुरफुर गरी उड्छ पुतली ।
पुतलीझैं साजिएका हुन्छन् साना–साना नानी,
पढीलेखी ज्ञानी भई बन्छन् बुद्धिमानी ।
पुतलीझैं मलाई पनि उड्न मन लाग्छ,
भमराझैं फूलबारीमा डुल्न मन लाग्छ ।
सानी–सानी पुतलीको राम्रो आनीबानी,
फूलको रस चस्न जान्छ आफ्नै घर मानी ।
फुरफुर गर्दै पुतली धेरै ठाउँ डुल्छिन्,
फूलको डोली चढ्दै बगैँचामा झुल्छिन् ।
फूलबारीको माझमा हुन्छ पुतलीको बास,
मलाई पनि पुतलीझैं उड्न मन लाग्छ ।
- राजकुमार खत्री, कक्षा–८
नागर्जुना एकेडेमी, ललितपुर
प्रकाशित : माघ ५, २०७६ १२:०२
माघ ५, २०७६ मनोज पौडेल
ओथारो बस्न गुँड बनाउँदै गरेका सारसको जोडी लुम्बिनीको ‘भियतनाम बिहार’ नजिकै भेटिए । सारस विश्वमै दुर्लभ पक्षीमा सूचीकृत चरा हो । उडन सक्नेमध्ये सबैभन्दा अग्लो चरा पनि हो । लुम्बिनी र आसपास क्षेत्रमा सारस देख्न सकिन्छ । तर यसले अण्डा पारेको, ओथारो बसेको र बच्चा हुर्काएको देख्न/हेर्न पाउनु दुर्लभ नै हो ।
लुम्बिनीमा सारसको त्यो जोडीले कसरी गुँड बनाए ? पोथी सारसले कति दिनमा अण्डा पार्‍यो ? त्यो अण्डाबाट बच्चा कोरल्न कति अवधि लाग्यो  ? अनि माउहरू मिलेर कसरी बचेरा हुर्काए ? त्यो बचेराले जीवनको पहिलो उडान भर्न कति दिन लाग्यो ? सारसले थाहा नपाउने गरी लुकीलुकी यी रोचक क्षणहरू क्यामेरामा कैद गर्न चार महिना लाग्यो । कोपिलाको यो अंकमा हामी यिनै रोचक क्षण र त्यसका तस्बिर लिएर आएका छौं ।
विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीका मनमोहक र चित्ताकर्षक विहार–गुम्बाहरू घुम्दै जाँदा भियतनाम विहारछेउ पुगेँ । विहारको बीचमा सानो पोखरी थियो । त्यसको छेउमै जोडी सारस विचरण गर्दै थिए । उडन सक्ने चरामध्ये सबैभन्दा अग्लो मानिने सारस विश्वमै दुर्लभ पक्षीमा सूचीकृत छ । ती सारसका गतिविधिले मेरो ध्यान तान्यो । तिनीहरू नजिकैका झिजाझिजी बटुल्दै थिए । भालेपोथी मिलेर परपरबाट पनि पातपतिङ्गर ओसारिरहेका थिए । त्यसलाई पोखरीबीचमा रहेको अग्लो ठाउँमा थुपारिरहेका थिए, जुन निकै सुरक्षित स्थल पनि थियो । झिजाझिजी अग्लो बनाएको देख्दा लाग्यो– पक्कै नयाँ बचेराका लागि तयारी हुँदै छ । अर्थात्, त्यो ओथारो बस्नका लागि गुँड बन्दै थियो ।
ती सारस उडलान् र भाग्लान् भनेर सावधानीपूर्वक नजिकै पुगेँ । क्यामेरा झिकेँ । १५०–६०० एमएमको जुम लेन्स लगाएर हतारहतार तिनका गतिविधिलाई क्यामेरामा कैद गरिहालेँ । तस्बिर राम्रा आए । मनमा हुटहुटी जाग्यो– अब सारसले ओथारो बसेदेखि बच्चा हुर्काएकोसम्म फोटो फिचर गर्ने । आफ्नो योजना सुनाएर सहयोगका लागि विहारका कामदारसँग समन्वय गरेँ ।
गुँड बनाएर पोथी बस्न थालेको दृश्य खिचेँ । अण्डा पारेको खिच्ने रहर मन उर्लिरहेको थियो । अब कति दिनमा अण्डा पार्ला ? त्यसबारे अध्ययन पनि गरेँ । मलाई आफ्नो घर कपिलवस्तुको तौलिहवाबाट त्यहाँ पुग्न बाइकमा आधा धण्टा लाग्थ्यो । म हरेक साता पुग्न थालेँ । आवश्यक पर्दा सातामा दुई पटक पनि पुगेँ । कहिले अण्डा पार्छ र अण्डासँग सारसको फोटो खिच्न पाइन्छ भनेर लामो प्रतीक्षा गरेँ । तीन सातापछि बल्ल अण्डा पार्‍यो, तर एउटा मात्र । अण्डा स्याहार गरेको तस्बिरहरू पनि गजबले खिचेँ । अण्डालाई छोपेर ओथारो बसेको तस्बिर पनि क्यामेरामा कैद गरेँ । त्यसपछि निरन्तर फलो गर्दै गएँ ।
३७ दिनमा सारसले बच्चा कोरलेछ । बचेरा जन्मेको खबर पाउनेबित्तिकै निकै उत्साहित बनेँ । सानो बचेरा र उसका माउसँगै भएको तस्बिर खिच्ने हुटहुटी चल्यो । जुम लेन्ससहित पुगिहालेँ । तर २ दिनसम्म तस्बिर खिच्नै सकिएन । घाँसमा बचेरा कता हराउँथ्यो कता । ३ दिनपछि यताउता हिँड्न थाल्यो । अनि बल्ल तस्बिर लिने मौका जुर्‍यो । तर चित्त बुझेन । बच्चा विस्तारै बढ्दै गयो । माउसँग चर्न हिँडेको तस्बिर लिएँ । आहारा खुवाएको दृश्य पनि क्यामेरामा कैद गर्न सफल भएँ । सानो बचेरा बडेमाका माउसँग हिँड्दा गजब देखिन्थ्यो ।
बच्चा जन्मेपछि निरन्तर २ महिनासम्म तिनीहरूको फलो गरेँ । मेरो फोटो खिच्ने हुटहुटी सकिएसँगै माउहरूले बचेरालाई उडाएर लिएर गए । करिब ४ महिनासम्म निरन्तर खटिएर सारसले गुँड बनाएको, अण्डा पारेको, ओथारो बसेको, बच्चा कोरलेको र हुर्काएको क्षणलाई क्यामेरामा कैद गरी फोटो फिचर पूरा गर्न सफल भएँ ।
निक्कै परबाट तस्बिर खिच्थेँ । तस्बिर लिँदा बचेरा र सारसलाई त्रास नहोस् भनेर पूरै सचेत थिएँ । जुम लेन्सहरू भएका कारण तिनीहरूको स्वतन्त्रतालाई बाधा पुगेन । निर्भीक र निडर भएर बचेरा हुर्काउन कुनै समस्या भएन ।
दुर्लभ पक्षीको प्रजनन् प्रक्रियाको फोटो फिचर गर्न पाउँदा मन निकै हर्षित भएको छ । नजिकबाट गतिविधि हेर्दैर् सरससँग बिताएका क्षणहरू रोमाञ्चित रहे । लुकामारी गरी विभिन्न एंगलमा फोटो खिच्न पाउँदाका क्षणलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न । फोटोग्राफीको छुट्टै मज्जा लिएँ मैले ।
उडन सक्ने चरामा सारस सबैभन्दा अग्लो हो । शरीरको वजन बढी हुनाले सारस धेरै माथि उडन सक्दैन । बढीमा ४०/५० फिटसम्म हो । उड्ने क्रममा बिजुलीको तारमा परेर पनि कैयौं सारस मर्ने गर्छन् ।
नेपालमा सारस सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी आसपास पाइन्छन् । यिनीहरू १० किलोसम्म तौल र साढे ५ फिटसम्म अग्ला हुन्छन् । रोचक के छ भने, दुवैतिरका पखेटा फिँजायो भने १० फिटसम्म लामो हुन्छ । सबैभन्दा बढी पखेटा फिँजाउन सक्ने चरामा सारस र हिमाली गिद्ध हो ।
नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–०२९ ले संरक्षणको सूचीमा राखेको ९ पक्षी प्रजातिमध्ये सारस पनि एक हो । ‘सारसले सर्पहरू सजिलै मारेर खान्छ,’ चराविद् डा. हेमसागर बरालले भने, ‘त्यस कारण सारस बस्ने ठाउँवरिपरि सर्पको डर हुँदैन ।’ बालीलाई नोक्सान पुर्‍याउने शंखेलगायत कीराफट्यांग्रालाई पनि सारसले आहारा बनाउँछ । नजिकै चितुवा, बाघभालुलगायत जन्तु आउन लागे पहिले कराएर अग्रिम जानकारी दिन्छ । बढ्दो विषादी प्रयोग, मानवीय अतिक्रमण र खेतीयोग्य जग्गा घट्दै गएका कारण सारस अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । नेपालमा करिब ५ सय सारस रहेको अनुमान गरिएकामा कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा मात्र ४ सय जति छन् । रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सारसलाई नगर पक्षी घोषणा गरेको छ ।